Mampihena lanja, miady amin'ny tsy fahitan-tory ary bebe kokoa amin'ireo fampiharana sy lalao fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Very lanja, miady amin'ny tsy fahitan-tory sy maro hafa, miaraka amin'ireo fampiharana sy lalao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Mampanantena anao aho fa tsy hitako ny andro ho avy, ary toa ahy, azo antoka fa maro ianareo no nitovy. Saingy tonga ihany ny andro izay toa tsy tonga ary afaka milaza sahady isika fa zoma ihany izao! Ny ankamaroantsika dia tsy ho ela dia ho vonona ny ho kamo kely kokoa noho ny mahazatra, ary hanadino ny adin-tsaina mandritra ny herinandro. Ary hanome anao tanana an'ity asa sarotra ity, anio no itondrako anao a fanangonana vaovao fampiharana sy lalao maimaim-poana, mba hahafahanao mampiasa tsara ny fotoana malalaka anananao amin'ny faran'ny herinandro.
Saingy alohan'ny hanombohantsika, ny fampitandremana mahazatra, fa efa mifankahalala isika 😜: ireto fampiharana sy lalao manaraka ireto dia maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra, izany hoe, lany daty izy ireo. Avy amin'ny Actualidad iPhone dia tsy afaka manome toky anao izahay fa manan-kery izy ireo amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity saingy indrisy, tsy fantatray hoe rahoviana no tapitra ny tolotra: tsy dia manambara izany ny mpamorona, toy ny fihenan'ny vidin'izy ireo. mahagaga fa mahagaga ihany koa rehefa homena vola indray izy ireo. Noho izany, misintona izao ary mieritrereta avy eo, izay maimaim-poana ary tsy andoavanao vola.
1 Akanjo mitaingina maitso kely
2 Hypnosis Diet mora hamoizana tavy & hampitsaharana ny Binge Eating Pro
3 Manasitrana hypnosis tsy fahitan-tory
4 Tilikambo miboiboika 2
5 Biby preschool
Akanjo mitaingina maitso kely
Maro aminareo no efa reny sy raim-pianakaviana ary fantatrareo fa ny iPhone sy ny iPad dia mety ho fitaovana tena tsara hanampiana amin'ny fanabeazana sy ny fahamatorana ireo ankizy kely ao an-trano. Izany no antony anombohantsika anio ity safidy fampiharana sy lalao maimaim-poana ity Akanjo mitaingina maitso kely, nofidian'i Apple tenany ho Free App amin'ny herinandroa, tsy manadino fa ampahany tamin'ny fifantenana ny "Best of 2015" tao amin'ny App Store Rosiana.
"Little Green Riding Hood" dia sangan'asa fampiharana vaovao ho an'ny ankizy. Ankafizo ny sary mahafinaritra, ny endri-tsoratra mahafinaritra, ny tantara mamirapiratra ary ny fitantarana an-tsary tena tsara! Mitadiava tantara mahafinaritra momba ny zazavavy kely, ny renibeny, ireo sakaizany ary amboadia noana. Fa aza matahotra. Ao amin'ity kinalan'ny tantara malaza malaza nataon'i Charles Perrault sy ny Brothers Grimm ity dia tsy mila mihinana olona akory ilay amboadia. Te hahafantatra ny antony ianao? Avy eo ampidino izao Little Green Riding Hood ary mifalifaly amin'ny zanakao milalao kilalao kely sy mianatra ny fomba fahandro masaka!
Little Green Riding Hood dia manana "Endri-tsoratra mahafatifaty" ary sary mihetsika sy sary mahafinaritra noforonin'ilay mpanao sariitatra marina sy malaza toa an'i Andrey Gordeev (mpandresy liona Cannes sy loka hafa). Ho fanampin'izay dia manome isa marobe lalao mini izany dia "hampifaly sy hampifalifaly ny ankizy sy ny olon-dehibe", ary koa ny Boky Cookie an'i Bebe, misaotra izay hahalalan'ny zaza ny fomba fahandro amin'ny sakafo mahasalama sy voalanjalanja ».
Little Green Riding Hood dia boky fifandraisana mahafinaritra ho an'ny iPad izay mampahafantatra ny ankizy ny fomba fiaina salama amin'ny fomba filalaovana. Tantara angano mahafinaritra momba ny fisakaizana, yoga ary ny hevitra momba ny fiainana salama.
Hood kely mitaingina maitso kely: Boky iraymaimaim-poana
Hypnosis Diet mora hamoizana tavy & hampitsaharana ny Binge Eating Pro
Ity fampiharana ity, "Misongadina ao amin'ny Discovery Channel," dia mampanantena a fihenan-danja haingana noho ny fanampian'ny sosokevitra hypnosis. Na izany na tsy izany, inona no tianao holazaiko aminao! Tsy mino na inona na inona aho, fa satria afaka izany dia mikasa ny hanandrana aho, hijery izay mitranga.
Hypnosis Diet Mora Izy io dia manana vidiny mahazatra 3,99 euro fa ankehitriny azonao atao ny manome azy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Manasitrana hypnosis tsy fahitan-tory
Ary raha ankoatry ny fihenan'ny lanja dia mila matory tsara isika, ity misy antony iray hafa hypnosis, amin'ity fotoana ity hiadiana amin'ny tsy fahitan-tory.
Manasitrana hypnosis tsy fahitan-tory Izy io dia manana vidiny mahazatra 3,99 euro fa ankehitriny azonao atao ny manome azy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Tilikambo miboiboika 2
Fantastic lalao, tsotra nefa mila mazava tsara, ary izany dia hametahana ny iPhone mandritra ny ora maro.
Tilikambo miboiboika 2 Izy io dia manana vidiny mahazatra 1,99 euro fa ankehitriny azonao atao ny manome azy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Tilikambo miboiboika 2€ 1,09
Ary mifarana amin'ny fomba nanombohantsika ihany isika, niaraka tamin'ny lalao maimaim-poana ho an'ny kely indrindra amin'ny trano (hatramin'ny 5 taona) izay azon'izy ireo atao mianatra ny hevitra fototra momba ny kajy sy matematika amin'ny fomba mahafinaritra sy mampiala voly.
Biby preschool Izy io dia manana vidiny mahazatra 3,99 euro fa ankehitriny azonao atao ny manome azy maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Lalao preschool matematika an-tsekoly€ 5,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » fivarotana » Very lanja, miady amin'ny tsy fahitan-tory sy maro hafa, miaraka amin'ireo fampiharana sy lalao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Parody mampihomehy McDonald maka tahaka ireo horonantsary nisehoan'i Jony Ive
Apple dia aingam-panahy avy amin'ny afisy Malaga Festival hanolotra WWDC17